एक दिन लोग्नेमान्छे भएर बाँच्ने मन छ ........ - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ७ श्रावण २०७६, मंगलवार १४:२२ |
त्यो दिन कामबाट फर्किसकेपछि खाना खाएर ओछ्यानमा पल्टिएँ । निन्द्रा भने फिटिक्कै लागेको थिएन । मन गह्रौं ढुंगाले थिचिरहेको जस्तो भएको थियो । निन्द्रा नलागेपछि आँखा सामाजिक संजालतिर डुलाउन थालें । सामाजिक संजालमा फलानाले श्रीमती कुट्यो, फलानाले श्रीमतीको हत्या गर्यो भन्ने पोस्ट देखेर मन झन् बेचैन बन्यो । निन्द्रा नलागेर छटपटी भएको समयमा झन् टाउको पनि भारि हुन थाल्यो ।
अचम्म छ है ! केटा मान्छेहरुलाई जेसुकै गर्न पनि छुट ! जे सुकै गर्ने केटा मान्छे झन् मर्द रे ! म पनि केटा मान्छे भएर जन्मिन पाएको भए ! छिमेकी बहिनी केटा मान्छेको व्यवहारलाई मन पराउँदिनथिन् । सधै दाईसंग सोध्ने गर्थीन्, ” दाई ! तपाईं पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ ? के सबै केटा मान्छे त्यस्तै हुन्छन् ? केटा मान्छेहरु किन त्यस्ता हुन्छन् ” । आज मलाई पनि मेरो बुवा, मेरा दाइ भाइ, मेरा केटा साथीलाई सोध्ने मन छ । तर रातीको समय छ, एक्लै छु । आफ्नै कोठाभित्र यी प्रश्न दिमागमा खेलाएर बस्नु बाहेक विकल्प पनि छैन । हुन त मलाई विशेष लिङ्ग, वर्ग, जात आदिलाई लिएर कुरा गर्न मन लाग्दैन । तर पनि परिस्थितिहरुले बोल्न बाध्य बनाउँदा रहेछन् । त्यसैले प्रत्यक्ष रुपमा सोध्न नपाएका प्रश्नहरु लेख्न थालें ।
थाहा पाएकी छु, त्यो बहिनीले अझै प्रश्नहरुको उत्तर भेटेकी छैन । आजकल त ऊ भन्छे, ” बाउ बाजेको पाला देखी चलिरहेको संस्कार र परम्परा रे , दिदी ” । वास्तवमा उनलाई बाल्यकाल देखि नै ती प्रश्नले सताउने गर्थ्यो, बाउले आमालाई सधै कुटेको जो देख्थीन् । त्यसपछि आफूप्रति अरु केटाको नजरले पछि झन् उनले केटा मान्छेलाई नै घृणा गर्न थालेकी थिईन् ।
सामाजिक संरचनाले साँच्चै नै कति अन्याय गरेको छ । त्यसैले त केटीहरु आफ्नो जीवनलाई बोझ मान्छन् । श्रीमती मरेको तेह्र दिन समेत नहुँदै विवाह गर्ने लोग्ने मर्द हुन्छ । लोग्ने मरेपछि समाजले जीवनभर सेतो लुगा लगाउने आदेश दिन्छ । विवाह गरि या रंगीचंगी लुगा लगाई भने चरित्रहीन भनिदिन्छ । कहिलेसम्म चलिरहला यो परम्परा, यो संस्कार, यो मानसिकता ?
मैले सबै पुरुष खराब र सबै महिला असल भन्न खोजेको होइन । तर मलाई एक दिनको लागि मात्रै भए पनि पुरुष भएर जिउने रहर छ । मलाई उनीहरुको त्यो विभेदकारी र हिंसात्मक मानसिकता कसरि जन्मिन्छ, उनीहरुले साथीहरु बीच कस्ता कुरा गर्छन्, उनीहरुको मनमा कस्ता भावना जागृत हुन्छन्, मलाई अनुभव गर्न मन छ । श्रीमती या कुनै पनि केटीमाथि हिँसा गर्नुलाई कसरि उनीहरुले आफ्नो अधिकार सम्झिन्छन्, मलाई जान्न मन छ ।
Previousभूतसंग विवाह गरेकी महिलाले उसले आफूलाई सताएको भन्दै गरिन् सम्बन्ध-विच्छेदको घोषणा
Nextमेलम्ची आयोजनाको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा पूर्व माओवादीलाई
अष्ट्रेलियामा दश वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी गर्मी : बिजुली कट्यो, एक सय ट्राफिक लाइट बन्द
११ माघ २०७५, शुक्रबार ०७:३४
२०१८ सेप्टेम्वर २५ तारिखको राशिफल
९ आश्विन २०७५, मंगलवार ००:००
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भव्य शैक्षिक मेला: विद्यार्थीहरुको लागि विशेष छुट सहित सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा
१२ असार २०७५, मंगलवार ०४:२७
त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग चर्कियो,आन्तरिक तथा बाह्य दुवै उडान अवद्ध
२२ बैशाख २०७५, शनिबार ०७:३४
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण आगामी चैतपछि मात्रै सुरु हुने
नक्कलि बिवाह गरेर अष्ट्रेलिया जाने युवायुवतीको संख्या बढ्दो
नेपालले पठाएको पत्रको भारतले दिएन जवाफ
मानव विकास सूचकांकमा नेपालको ०.१९९ मात्र सुधार